Mir, Canonical's graphical server ine shanduko nyowani | Linux Vakapindwa muropa
X ndiyo nzira yaunoziva nayo graphical server nekusarudzika kune mazhinji emazuva ano Unix-senge anoshanda masisitimu, kusanganisira Linux. Asi iro rinorema uye rekare chirongwa, chakagadzirwa makore mazhinji apfuura uye saka hachina kugadzirirwa iyo nyowani graphic era, ndosaka zvisina kurema, kureruka mamwe mapurojekiti akaberekwa anogona kuita zvakafanana mabasa saX pasina kufungidzira kutsamira pane inorema sisitimu. Ndiri kutaura nezvaMir naWayland.
Mir ndiyo chirongwa chinorairwa neCanonical, nepo Wayland iri chirongwa chakazvimirira chakagadziriswa nharaunda. Panyaya yaMir, inofanirwa kuve iri purojekiti inozotsiva X mushanduro nyowani dzeUbuntu mamiriro emifananidzo, ndokuti, Kubatana. Imwe nguva yapfuura, ivo vanogadzira Canonical vaive vaburitsa vhezheni Mir 0.26, saka ichiri chirongwa chidiki kwazvo sezvatinoona kubva pakuverenga nhamba. Asi iri kutofambira mberi uye isu tichaona mhedzisiro munguva pfupi.
Mir yakanyanya kutarisisa kusangana yakawanda sei Canonical yakazivisa uye yakawanda sei iri kunetseka kuwana, kunyangwe ichisara kumashure kwevakwikwidzi vayo vakananga (ona Microsoft Windows 10). Kunyangwe veRedmond vasina kuwana kuzere kusangana, ivo vari kumberi. Ndinovimba kuti Mir uye nhau dzedzimwe dzinotevera dzeUbuntu dzinounza tariro yakawanda uye zvinoshamisa zvinonakidza, nekuti patova nekumwe kunonoka uye kudzoserwa.
Uye kuenderera neMir 0.26, Canonical yakapihwa rezenisi kodhi pasi pe LGPL. Vagadziri vacho vakabatikana zvikuru kuita fambiro mberi kuvhura yakagadzikana vhezheni yeprojekti uye parizvino, vakatowana shanduko dzinoverengeka dzakakosha muAPI, idzo pamwechete nerezinesi nyowani dziri pakati pekuchinja kwakakosha kwakaitwa neprojekiti . Asi zvechokwadi ivo havasi ivo chete shanduko dzakaitwa, uye zvimwe zvichauya ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Desks » Mir, Canonical's graphical server ine shanduko nyowani
Canonical zvechokwadi yarasikirwa nhangemutange yekubatana, yaive nemukana mukuru asi kwete, izvozvi zvakangofanana, uye pandinokwanisa kuita kubatana kunoshanda, zvakare edza kugutsa nyika kuti zviri nani, uye nekudaro nguva dzose mutsara. Zvinodemba.